WPML: Adikao ny tranokalanao WordPress amin'ity Plugin Multilanguage ity sy serivisy fandikan-teny tsy voatery | Martech Zone
WPML no fenitra amin'ny indostria amin'ny fampivoarana sy fandikana ny atiny amin'ny tranonkala WordPress misy fiteny maro. Izaho izao dia mihazakazaka ny GTranslate plugin amin'ny Martech Zone hahafahana manao fandikanteny milina tsotra sy fiteny maro. Nanitatra ny zava-bitantsika manerantany ary koa ny fivezivezena ny motera fikarohana mankany amin'ny tranokalako.
Izahay dia miasa amin'ny famoahana tranonkala ho an'ny mpanjifa amin'izao fotoana izao izay manana mponina Hispanika manan-danja. Na dia mahavita mandika tsara ny masinina aza ny plugin toa ny GTranslate, dia tsy hisambotra ny nuansa amin'ny fitenim-paritra ho an'ny mpihaino Meksikana-Amerikanina marobe izay antenaina hahatongavana. Ho an'izany, handika ny atiny ho matihanina izahay raha te hanana fiantraikany lehibe indrindra.
Ny fandikan-teny manokana dia mitaky vahaolana hafa, ary ny mpitarika ny plugins fandikana WordPress dia WPML.
Ahoana ny fandikana ny tranokalanao WordPress amin'ny WPML
WPML Features dia misy
WordPress - Adikao amin'ny tranokalanao WordPress ny singa rehetra, ao anatin'izany ny fitetezana, ny widget, ny pejy, ny lahatsoratra, ny karazana post custom, na ny singa hafa. WPML koa dia manohana ny tonian-dahatsoratry Gutenberg.
fiteny - Ny WPML dia misy fiteny 40 mahery. Azonao atao koa ny manampy ny fiteny tsy mitovy aminao (toa ny Espaniola kanadiana na espaniola meksikana) amin'ny alàlan'ny tonian-dahatsoratra WPML.
Rafitra URL - Azonao atao ny mandamina ny atin'ny fiteny samihafa amin'ny sehatra iray (amin'ny lahatahiry fiteny), amin'ny sub-domains, na amin'ny domains hafa tanteraka.
Fandikana ny milina - Makà lohalaharana amin'ny fandikan-teninao amin'ny alàlan'ny fandikana ny masinina mba hahafahanao manangona fotoana sy fandaniana amin'ny serivisy fandikan-teny any ambany.
Dikantenin'ny mpampiasa - Avadiho ho mpandika teny ireo mpampiasa WordPress tsotra. Ny mpandika teny dia tsy mahazo miditra afa-tsy amin'ny asa fandikan-teny manokana izay omen'ny mpitantana fandikan-teny azy ireo.
Serivisy fandikan-teny - Ampifandraiso amin'ny fitantanana fandikan-teny mahery WPML miaraka amina serivisy fandikan-teny tianao. Alefaso mora foana ny atiny ho an'ny fandikan-teny avy amin'ny Dashboard fandikan-tenin'ny WPML. Rehefa vita ny fandikan-teny dia miverina miverina ao amin'ny tranokalanao izy ireo, vonona ny hamoaka.
Fandikana temotra sy plugin string - Ny WPML dia manafaka anao amin'ny olana amin'ny fanitsiana ireo rakitra PO sy ny fampidinana ireo rakitra MO. Azonao atao ny mandika lahatsoratra amin'ny plugins hafa sy amin'ny efijery Admin mivantana avy ao amin'ny Fandikana String interface tsara.
WooCommerce Fanohanana amin'ny fiteny maro
Manaova tranokala e-varotra amin'ny fiteny maro miaraka amin'ny WooCommerce. Ankafizo ny fanohanana feno ho an'ny vokatra tsotra sy miovaova, vokatra mifandraika, varotra ary fampiroboroboana, ary ny zavatra hafa rehetra atolotry WooCommerce.
Mampiseho aminao ny WPML izay lahatsoratra mila fandikan-teny ary manangana ny magazay voadika manontolo ho anao. Ny mpitsidika dia hankafy ny fizotran'ny fividianana toerana feno, manomboka amin'ny lisitry ny vokatra, amin'ny alàlan'ny sarety sy fizahana, ary na dia ny mailaka fanamafisana eo an-toerana aza.
Tsy mila manao zavatra manokana ianao hamoronana lohahevitra vonona amin'ny fiteny maro. Ampiasao fotsiny ny asan'ny WordPress API ary WPML no mitandrina ny ambiny.
Fambara: mpiara-miasa amiko aho WPML.
Tags: multi-tenywordpress maro fitenyfirafitra permalink marobe fitenyfandikana pluginserivisy fandikan-tenyFandikana WooCommerceWordPressfandikana wordpressplugin amin'ny fandikana wordpresswpml
Ahoana ny fomba fandefasana sy fitehirizana ny fifandraisana amin'ny Salesforce miaraka amin'ny Forms Gravity sy WordPress